သဘာဝဓာတ်ငွေ့ - ဝီကီပီးဒီးယား
နိုင်ငံအလိုက် နှစ်စဉ်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုဗမီတာဖြင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း။
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ဆိုသည်မှာ အဓိကအားဖြင့် မီသိန်း ပါဝင်သော ဓာတ်ငွေ့ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းကို အခြား ရှေးရုပ်ကြွင်းလောင်စာများ နှင့်အတူတွဲဖက်၍ ကျောက်မီးသွေးအလွှာများတွင် သလင်းကျောက်ပုံစံဖွဲ့စည်းပုံ ရှိသော မော်လီကျူးအမျိုးအစားများပါဝင်သည့် ဓာတုပစ္စည်း မီသိန်း အဖြစ်တွေ့ရပြီး စိမ့်မြေများ ၊ ရွှံ့နွံမြေများ နှင့် အမှိုက်သရိုက်ဖြင့်ဖို့ထားသော ဖို့မြေများတွင် မီသနိုဂျင်း(န်)(စ်)ဟု သိထားကြသော အလွန်သေးငယ်သည့် ဇီဝရုပ်သက်ရှိများ ကြောင့် မီသိန်း ဓာတ်ငွေ့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည် အရေးကြီးသော လောင်စာအရင်း အမြစ် ၊ ဓာတ်မြေဩဇာများ အတွက် အဓိကဖြည့်သွင်းပေးသည့်ကုန်ကြမ်းနှင့် ပြင်းထန်သောဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ တစ်ခုဖြစ်သည်။
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို လောင်စာအဖြစ်အသုံးမပြုနိုင်မီ၊ ၎င်းသည် မီသိန်း မှလွဲ၍ အခြားပစ္စည်းများ အားလုံးနီးပါးကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် ကျယ်ပြန့်သော နည်းစနစ်တစ်ရပ်ဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းကို မဖြစ်မနေခံရမည်။ ထိုနည်းစနစ် တစ် ရပ်ဖြင့် ပြုပြင်ခြင်း၏ ဘေးထွက်ပစ္စည်းများတွင် အီသိန်း ၊ ပရိုပိန်း ၊ ဗျူတိန်း ၊ ပန်တိန်း နှင့် ပို၍မြင့်မားသော မော်လီကျူး အလေးချိန်ရှိသည့် ဟိုက်ဒရို ကာဗွန်၊ ဒြပ်စင်ဖြစ်သောဆာလဖာ၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊ ရေငွေ့နှင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဟီလီယန်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်တို့ ပါဝင်သည်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို အရပ်သုံးအနေဖြင့် ရှင်းလင်းသောဓာတ်ငွေ့ဟူ၍ မကြာခဏ ရည်ညွှန်းလေ့ရှိပြီး အထူး သဖြင့် အခြားစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော ရေနံ သို့မဟုတ် ကျောက်မီးသွေးတို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် ဖြစ်သည်။
၁.၁ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်း
၂ အိမ်တွင် အသုံးပြုခြင်း
သဘာဝဓာတ်ငွေ့သည် ဓာတ်ငွေ့တာဘိုင်များ နှင့် ရေနွေးငွေ့ တာဘိုင်များကို အသုံးပြုခြင်းမှတဆင့် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၏ အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ကြိုးများဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အမြင့်ဆုံး ဖြန့်ဖြူး သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ အများစုနှင့် လျှပ်စစ်ကြိုးဖြင့်မဟုတ်ဘဲ အင်ဂျင် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးစက် အချို့သည် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို အသုံးပြုကြသည်။ အထူးသဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း မြင့်မားသော အကျိုးသက် ရောက်မှုများကို ပေါင်းစပ်ထားသောယန္တရားလည်ပတ်မှု နည်းလမ်းအတွင်းတွင် ဓာတ်ငွေ့တာဘိုင်များကို ရေနွေးငွေ့တာဘိုင် တစ်ခုဖြင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း မှတဆင့် ရရှိနိုင်သည်။
သဘာဝဓာတ်ငွေ့သည် ရေနံနှင့် ကျောက်မီး သွေးကဲ့သို့သော အခြား ရှေးရုပ်ကြွင်းလောင်စာများ ထက်ပို၍ သန့်ရှင်းစွာလောင်ကျွမ်းပြီး၊ ထုတ်လွှတ်သည့် စွမ်းအင် တစ်ယူနစ်ပမာဏလျှင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ရေနံ ကို လောင်ကျွမ်းခြင်း ထက် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းပြီး ကျောက်မီးသွေး လောင်ကျွမ်းခြင်းထက် ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် လျော့နည်းသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို အသုံးပြု၍ရရှိနိုင်သော ပေါင်းစပ်ယန္တရားလည်ပတ်မှု လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ရှေးရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကို အသုံးပြု၍ရရှိနိုင်သော အသန့်ရှင်းဆုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီး ဓာတ်ငွေ့ကို သင့်လျော်သောကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် ရရှိနိုင်သည့်အခါတိုင်း ဤနည်းပညာကို ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးချသည်။ လောင်စာဆဲ(လ်) နည်းပညာသည် နောက်ဆုံးတွင် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ် ပြောင်းလဲရန်အတွက် ပို၍သန့်ရှင်းသော ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများကို ပေးကောင်း ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် ယခုအချိန်အထိ ဈေးနှုန်းမှာ အများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်၍ရသော ဈေးနှုန်းမျိုး မဟုတ်သေးပါ။
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြင့် မောင်းနှင်ပြေးဆွဲသော ဝါရှင်တန်.ဒီ.စီ မက်ထရို ဘတ်(စ်)ကား
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို အိမ်များသို့ပို့ပေးပြီး အိမ်များတွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြင့် လည်ပတ်သည့် ချက်ပြုတ်ရန် မီးဖိုများနှင့် မုန့်ဖုတ်ရန်ဖိုများဖြင့် ချက်ပြုတ်ခြင်း ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြင့် အပူပေးသောအဝတ်ခြောက်စက်များ၊အပူပေးခြင်း၊ အအေးပေးခြင်းနှင့် အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးကို ပင်မဘွိုင်လာမှ အပူပေးသည့် စနစ်ကဲ့သို့သော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ၎င်းဓာတ်ငွေ့ကို အသုံးပြုသည်။ အိမ် သို့မဟုတ် အခြားအဆောက်အဦး အပူပေး ခြင်းတွင် ဘွိုင်လာများ၊ မီးဖိုများ နှင့် ရေပူစက်များ ပါဝင်နိုင်သည်။ စီအင်ဂျီ ကို ကျေးလက်ဒေသရှိ အိမ်များတွင် ပိုက်ဖြင့်တပ်ဆင်ပြီး အများသုံးနိုင်ရန် ဖြန့်ချိသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ သို့ဆက်သွယ်ခြင်းများ မရှိ ဘဲ သို့မဟုတ် အလွယ်တကူ သယ်ယူနိုင်သော လျှပ်စစ်မီးဖိုတွင် အထက်မီးပေးသည့်အပိုင်းများဖြင့် သုံးစွဲကြ သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တစ်ခုလုံးတွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရွေးချယ်မှု အစီအစဉ်များမှတဆင့် ပုဂ္ဂလိက သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ပေးဝေသူများသည် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို ပေးဝေကြသည်။ မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ၊ စီအင်ဂျီ သည် အယ်ပီဂျီ ထက်ပို၍ စီးပွားရေး တွက်ခြေမကိုက်သောကြောင့်၊ ပရိုပိန်းသည် ကျေးလက်ဒေသ ဓာတ်ငွေ့၏ လွှမ်းမိုးသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
ဖိသိပ်ထားသောသဘာဝဓာတ်ငွေ့ မီသိန်း သည် ဓာတ်ဆီ (ပက်ထရို) နှင့် ဒီဇယ် ကဲ့သို့ သော အခြား မော်တော်ယာဉ် လောင်စာများနှင့် စာလျှင် ပို၍သန့်စင်သော အခြားရွေးချယ်စရာ နည်းလမ်း တစ် ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့သုံးစွဲသောယာဉ် စုစုပေါင်း ၉.၆ သန်းရှိပြီး ပါကစ္စတန် (၂.၀ သန်း) ၊ အာဂျင်တီးနား (၁.၇ သန်း) ၊ ဘရာဇီးလ် (၁.၆ သန်း) ၊ အီရန် (၁.၀ သန်း) နှင့် အိန္ဒိယ (၆.၅ သန်း) တို့ဖြင့် ဦးဆောင်နေသည်။ အချိန်တိုအတွင်း စွမ်းအင်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်များနှင့် ယေဘုယျအားဖြင့် တူညီသော်လည်း ခေတ်ပေါ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နိမ့်ကျ သည်။ ဓာတ်ဆီဖြင့် မောင်းနှင်သော ယာဉ်များကို သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ဖြင့်ပြောင်းလဲမောင်းနှင်ပါက ၎င်း တို့ အင်ဂျင်၏ နိမ့်ကျသော ဖိသိပ်ခြင်းအချိုး ကြောင့် အဆင်မပြေဖြစ်ကြပြီး သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ဖြင့်မောင်း နှင်နေ စဉ်တွင် ဝေမျှသည့်စွမ်းအား လျော့နည်းကျဆင်းခြင်းကို ဖြစ်စေသည် (၁၀ ရာခိုင်နှုန်း - ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း)။ မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ စီအင်ဂျီ သီးခြား အင်ဂျင်များသည် ထိုလောင်စာ၏ မြင့်မားသော အောက်တိန်း နံပါတ် ဖြစ်သည့် ၁၂၀-၁၃၀ ကြောင့် ပို၍မြင့်မားသော ဖိသိပ်ခြင်းအချိုး တစ်ခုကို အသုံးပြု ကြသည်။
သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့သည် Haber (ဟေဘာ နည်းစနစ်) ဖြစ်စဉ်မှတဆင့် ဓာတ်မြေဩဇာ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော အမိုးနီးယား ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် အဓိက ကုန်ကြမ်း ဖြည့်ဆည်း ပေးသောအရာ ဖြစ်သည်။
လေယာဉ်ထုတ်လုပ်သူ ရုရှလူမျိုး ၊ Tupolev (တူပိုလပ်(ဖ်)) သည် ယခု လောလောဆယ်တွင် အယ်အန်ဂျီ နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင် စွမ်းအင်သုံး လေယာဉ်ကိုထုတ်လုပ်ရန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ် တစ်ရပ်ကို စီမံခန့်ခွဲ နေသည်။ ထိုအစီအစဉ်သည် ၁၉၇၀ အလယ်ပိုင်းနှစ်များကတည်းက စတင်နေပြီဖြစ်ပြီး အယ်အန်ဂျီ နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင် မူကွဲများဖြစ်သော တီယူ- ၂၀၄ နှင့် တီယူ- ၃၃၄ ခရီးသည် တင်လေယာဉ်နှင့် တီယူ- ၃၃၀ ကုန်ပစ္စည်းတင် လေယာဉ်တို့ကိုလည်း ချဲ့ထွင်ရန် ကြိုးစားသည်။ ယခုလက်ရှိဈေးကွက် ဈေးနှုန်းများအရ အယ်အန်ဂျီ - စွမ်းအင်သုံး လေယာဉ်သည်တစ်တန် ကို လည်ပတ်မောင်းနှင်လျှင် ၅,၀၀၀ ရူဘယ် (~ အမေရိကန်ဒေါ်လာ၂၁၈/စတာလင်ပေါင်၁၁၂)လျော့နည်း၍ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီးအကြမ်းအားဖြင့် ၆၀ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှသောအတော်အတန်ကြီးသည့် ကာဗွန် မိုနောက်ဆိုဒ်၊ ဟိုက်ဒရို ကာဗွန် နှင့် နိုက်ထရိုဂျင် အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လွှတ်မှု လျော့ချခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည်။ မီသိန်း အရည်ကို ဂျက်လေယာဉ် အင်ဂျင်လောင်စာဆီအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများမှာ ၎င်းတွင် စံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသော ရေနံဆီ အရောများထက် ပို၍တိကျသောစွမ်းအင်ရှိပြီး ၎င်း၏ နိမ့်ကျသော အပူချိန်သည် ပို၍ကြီးမားသော ထုထည်ရှိသည့် အချိန်တိုအတွင်း အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် အင်ဂျင်မှဖိသိပ်သောလေကို ကူညီ၍အေးစေသည်။ အကျိုးအားဖြင့်အတွင်းပိုင်းအအေးခံစနစ် ကို အစားထိုးခြင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အိပ်ဇောပိုက်၏အပူချိန်ကို လျော့ချရာတွင် ၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ .
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို အများသုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော ဟိုက်ဒရိုဂျင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း နှင့်အတူ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ကိုထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို အသုံးပြုပုံများစွာရှိသည်- ဓာတုလုပ်ငန်း အတွက် အဓိကဖြည့်ဆည်းပေးသောအရာ၊ မော်လီကျူးပုံစံရှိဟိုက်ဒရိုဂျင် နှင့် အခြားဒြပ်ပေါင်း သို့မဟုတ် ဒြပ်စင်တို့အကြားတွင် ဓာတ်ကူပစ္စည်းတစ်ခု၏ အကူအညီဖြင့်ဖြစ်ပေါ်သော ဓာတုဓာတ်ပြုခြင်း၊ ရေနံချက် စက်ရုံများ အတွက် အရေးပါသော ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ယာဉ်များ တွင် လောင်စာအရင်းအမြစ် တို့ ဖြစ်သည်။
အခြားအသုံးပြုပုံများ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကို ချည်ထည်များ ၊ ဖန် ၊ စတီး ၊ ပလတ်စတစ် ၊ သုတ်ဆေး နှင့် အခြားထုတ်လုပ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ရာတွင်လည်း အသုံးပြုသည်။
↑ composition of natural gas။ Naturalgas.org။ 2012-07-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
DOE/EIA EIA Natural Gas Weekly Update Archived5December 2010 at the Wayback Machine.
Natural Gas Media Archived 30 September 2017 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သဘာဝဓာတ်ငွေ့&oldid=705303" မှ ရယူရန်